NABATA ONYE NKE ONYE Nkụzi
Nnọọ na ibe ozi nyocha tupu anyị emee, ebumnuche nke ibe a bụ ime ka ọ dị mfe dịka o kwere mee maka onye nleba anya ịchọta iwu niile. ọdịnaya webụsaịtị. Olileanya, nke a ga-enyekwu oge maka onye nyocha ọ bụla ka ọ mara ọmarịcha anyị ụmụaka, ezinụlọ na ụlọ akwụkwọ.
Manchester Communication Primary Academy (MCPA) bụ ụlọ akwụkwọ na-enye nkwado na Harpurhey, mpaghara enweghị oke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ụlọ akwụkwọ anyị nwere obodo dị egwu ma dị iche iche nke nwere ọkwa dị elu nke ndị mbata ọhụrụ mba ụwa, ụmụaka nwere Bekee dị ka asụsụ agbakwunyere na ụmụaka nwere mkpa mmụta pụrụ iche. Anyị kwenyere na nke a na-eme ka teepu nke ụlọ akwụkwọ anyị baa ọgaranya; ihe mgbochi ndị ọzọ maka mmụta abụghị ihe ngọpụ, ha bụ ihe mere anyị ga-eji mee nke ọma karị.
Dịka akụkụ nke Greater Manchester Academies Trust (GMAT), ebumnuche anyị bụ ịbụ onye nnọchi anya mgbanwe n'ime obodo. Nke a pụtara iweta nsonaazụ na ọchịchọ maka ụmụ anyị na ezinaụlọ anyị site na ọkaibe agụmakwụkwọ na nnukwu ego na-elekọta mmadụ.
Anyị ebumnuche usoro ọmụmụ doro anya, usoro ọmụmụ MCPA
Ọ bara ụba na ihe ọmụma, nke ụmụaka na-eji ngwa ngwa ma cheta ogologo oge.
Na-etinye aka, nke mere na ọchịchọ ịmata ụmụaka kpalitere ma na-etolite akpịrị ịkpọ nkụ maka mmụta.
A na-ahazi ya nke ọma wee jikọta ya, nke mere na ihe ọmụma ụmụaka na-ewuli elu ma na-eto eto.
Emebere ya nke ọma ma mejuputa ya, na-eji omume mara ihe akaebe na nyocha iji kọwaa nhọrọ.
Gbanyere mkpọrọgwụ na ụkpụrụ isii nke ịzụlite, nke mere na mkpa ụmụaka, ma nke uche na nke mmetụta uche, na-ezute, na-ebute àgwà magburu onwe ya maka mmụta na ndụ.
Ọ bụ ọgụgụ isi ka ụmụaka na-agụkarị na-agụkarị, na-anụ ụtọ ụdị dị iche iche na ndị odee.
Na-agụnye ihe niile, na-akwalite ndị nlereanya na ịkụziri nghọta nke akụkọ ihe mere eme na nkwenye nke nnukwu akụkụ nke ọha mmadụ.
Na-akwalite àgwà obodo anyị: Àgwà, omume, obi ike, mkpebi siri ike, ịnụ ọkụ n'obi, ọbụbụenyi na obi ụtọ.
Njikọ maka akwụkwọ nyocha mbụ dị mkpa
Biko jiri njikọ dị n'okpuru ebe a iji nweta akwụkwọ ndị dị mkpa, ma nwee chọgharịa na webụsaịtị sara mbara ka ị mata anyị nke ọma. Anyị na-atụ anya ịnabata gị na MCPA.
Kpọtụrụ anyị nkọwa
Onye otu onye ọrụ na-aza ajụjụ
SenCo ndu na ozi
Akụkọ Ofsted, Nsonaazụ KS2, Tebụl arụmọrụ
Usoro mkpesa ụlọ akwụkwọ
zipu akụkọ ozi
Ebumnuche nha nhata
Atumatu nchaji na mgbaghara
Uru na Ethos
Arịrịọ idetu akwụkwọ